Michelle Obama oo cambaareysay afduubka - BBC Somali
Michelle Obama oo cambaareysay afduubka
Marwada kowaad ee Maraykanka Michelle Obama ayaa cambaareysay afduubka gabdhaha laga afduubay dalka Nigeria waxayna ku tilmaamtay arrintaas fal argagax ah.
Waxay sheegtay in dawladda Maraykanka gacan ka geysan doonto sidii gabdhaha dib loogu celin lahaa qoysaskooda. Waxay Michelle Obama sheegtay arrinta ka dhacday Nigeria ee gabdhaha laga hor istaagay tacliintooda aanay ahayn mid iska dhacday uun.
Dhinaca kale Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa si buuxa isugu raacay in bayaan oranaya in gabdhihii wadar-ahaanta loogu qafaashay Nigeria ay u dhiganto dambi ka dhan ah bani-aadminimada,sida uu qabo sharciga caalamiga ah.
Golaha oo si kulul u cambaareeyey afduubkii dhowrka boqol ee arday,ayaa dhinaca kalena Qaramada midoobay waxay Nigeria u dirtay ergey gacan ka geysta soo furashada gabdhaha.